Macchanger: chishandiso chekuchinja iyo MAC kero yekombuta yako | Linux Vakapindwa muropa
Una Kero yeMAC (Media Kuwana Kudzora) ndiyo 48-bit yakasarudzika chinongedzo (6 mabhuru maviri ehexadecimal mavara (4 bits)) yakapihwa nemugadziri kune chimedu che network network (senge isina waya kadhi kana kadhi yeEthernet).
Se inozivikanwawo sekero chaiyouye yakasarudzika kune yega yega kifaa. Inotemerwa nekugadziriswa neIEEE (ekupedzisira makumi maviri nemana mabiti) uye inogadzira (ekutanga makumi maviri nemana mabiti) vachishandisa yakasarudzika yakasarudzika chiziviso
Dzimwe nguva tinouya kuzoshandisa sevhisi inoda kunyoreswa kwedu MAC kero, izvi kuitira kudzikisira kuwana.
Ndiwo muenzaniso mune ma routers atinogona kugadzira chena runyorwa kana dema runyorwa rweMAC kero mune iyo mukana kune iyo network inogona kupihwa kana kuramba.
Izvo zvakare chinhu chikuru chinobatsira kana iwe uchida kuchengetedza zvakavanzika zvako. Kana iwe usiri kuda kufumura iyo chaiyo MAC ID kana yakabatana kune yeruzhinji WiFi yekuwana poindi, unogona kungoichinja kana kuiteedzera neimwe MAC kero.
Muchiitiko cheLinux isu tine chishandiso chine simba izvo zvinogona kutibvumidza kuti tishandure kero yedu yeMAC.
Macchanger ndeye yemahara uye yakavhurwa sosi application iyo inotibvumidza isu kuona uye kushandisa iyo MAC kero yechikwata chedu pese painotanga.
Ichi chishandiso chinogona kushandiswa kubva kuchiteshi uye zvakare chine GUI (mushandisi interface).
1 Maitiro ekuisa Macchanger paLinux?
2 Mashandisiro ekushandisa Macchanger paLinux?
Maitiro ekuisa Macchanger paLinux?
Macchanger chishandiso chinowanikwa mune angangoita ese maLinux kugovera saka kuwanikwa kwayo hakumiriri chero dambudziko.
Kuti uiise, ingo tsvaga Macchanger neyedu inodiwa software maneja.
Uyewo tinogona kuisa Macchanger kubva ku terminal nekuda kweizvi isu tinofanirwa kuvhura imwe nekuita iwo murairo zvinoenderana nekuparadzirwa kweLinux yatiri kushandisa.
Para gadza Macchanger muDebian, Ubuntu uye zvigadzirwa zveizvi ingo nyora unotevera kuraira:
Panguva ye Arch Linux, Antergos, Manjaro uye zvigadzirwa zvatinoisa iko kunyorera:
Kana iwe uri kushandisa Fedora, CentOS, RHEL kana imwe sisitimu yakatorwa pane idzi iwe yaunogona kuisa nechero iyi mirairo:
Kana iri vhuraSUSE iwe unoisa nayo:
Mashandisiro ekushandisa Macchanger paLinux?
Kutanga kushandisa iyi application mune yedu system, chinhu chekutanga chatinofanira kuita mushure mekuchiisa icho kuziva uye kuziva yedu MAC kero, nekuda kweizvi isu tinofanirwa kuvhura terminal uye nekuita unotevera kuraira:
Uye icharatidza runyorwa rwemashoko kwatingaone kero yedu yeMAC mairi ichave iri pamberi peHWaddr.
Kana zvakare nemurairo uyu:
Iko eth0 iri network network, mune yangu kesi ndeye iyo.
Uye kero inoonekwa pamberi pechinki / ether xx: xx: xx…
Kugona kuchinja MAC kero yemidziyo yedu kubva kune iyo terminal, ingoita imwe yeanotevera mirairo zvinoenderana nezvatinoda.
Kutanga tinoda kudzima yedu network interface izvi tinozviita:
Iko eth0 iri network yangu interface, izvi zvinogona kusiyanisa zvishoma senge wlanX, ethx, enpxx pakati pevamwe.
Iwe unogona zvakare kuzviita ne:
Waita izvi izvozvi kana tikakwanisa kuenderera tichishandisa iko kunyorera. Muchiitiko chekugadzira yakakwana zvachose MAC kero, ingo mhanya:
Para rongedza chete madhizaini akanangana nema byte eazvino Mac kerol (ndiko kuti, kana kero yeMAC yakatariswa, ingadai ichiri kunyoreswa kubva kune mumwe chete mupi), ivo vanomhanya kuraira:
Para chinja iyo MAC kero kune yakatarwa kukosha ingo mhando:
Iko XX: XX: XX: XX: XX: XX ndiyo MAC yaunoda kuchinjira kwairi
Pakupedzisira, kudzorera iyo MAC kero kune yayo yekutanga uye yekusingaperi Hardware kukosha:
Y isu tinogonesa zvakare yedu network interface ne:
Kana zvakare ne:
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » General » Linux software » Macchanger: chishandiso chekuchinja iyo MAC kero yekombuta yako
Mhoroi, ndinoda kubvunza mubvunzo nezve kero yeMAC.
Ndiri kuita internship neVirtualBox uye ndinofanira kugadzirisa iyo TCP / IP yemachina maviri kuti vakwanise kutaurirana. Ini ndinofanira kuzviita neWindows uye neLinux. Icho chokwadi ndechekuti kana uchizviita neUbuntu ini handina kana dambudziko nekero yeMAC. Iyo michina miviri yaive nekero imwechete uye kunyangwe zvakadaro, pakuimisa uye nekuita iyo ping, haina kundipa chero kukanganisa uye ini ndakawana iyo TTL nguva. Dambudziko rakauya pakuzviita neWindows nekuti pachinzvimbo cheTTL, yakabuda: "destination host unreachable". Pakupedzisira ndakazoona kuti ndaifanira kuchinja kero yeMAC yeumwe wemakina. Kunyangwe sekutsvaga kwandinoita, handikwanise kuziva kuti nei muUbuntu ndakanga ndisina matambudziko uye muWindows ndaifanira kuchinja kero yeMAC.